Burma Partnership » United Nationalities Alliance
Posts Tagged ‘United Nationalities Alliance’ (5 found)
ယနေ့ကာလသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်[…]
October 17, 2015 • By United Nationalities Alliance • Tags: Crimes against humanity, Displacement, Ethnic Nationalities, Nationwide Ceasefire Agreement, Shan State, United Nationalities Alliance • Read more ➤
We, the United Nationalities Alliance, observe Burma’s transition to democracy is not up to the standard yet. We believe that it is still early to lift all the sanctions imposed while inatransition period as hundreds of political prisoners still remain in jail.
We believe that only getting ceasefire agreements with armed groups does not guarantee lasting peace until and unless political problems are solved with political means […]
November 19, 2012 • By United Nationalities Alliance • Tags: Ceasefire Negotiations, Peace, Political Prisoners, Sanctions, United Nationalities Alliance • Read more ➤
၆၅နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၆၅ နှစ်မြောက် တောက်လှန်ရေး နေ့တွင် စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ချက်တခု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ထိုထုတ်ပြန်ချက် တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိ တိုင်းရင်းသားတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်သော စွမ်းပကားဖြင့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အားခြေမှုန်း တော်လှန်နိုင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးကိုရယူ နိုင်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ရာ တမျိုးသားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုသည် အရေးကြီးလှကြောင်း စသည်တို့အပါအဝင် နအဖအစိုးရအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ခွန်ထွန်းဦး၊ မင်းကိုနိုင် အပါအဝင် မတားရားသဖြင့်ထောင်ချခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အာလုံးပြန်လွှတ်ပေးရန် အစရှိသည့် တောင်းဆိုချက်များကို လည်းထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ Download the statement in Burmese.
March 27, 2010 • By United Nationalities Alliance • Tags: Burmese, Political Prisoners, United Nationalities Alliance • Read more ➤
We, United Nationalities Alliance (UNA), have the honour to submit this letter of suggestions to help you put appropriate pressure on the State Peace and Development Council (SPDC) which has one‐sidedly promulgated the election laws which are not accordance with the UN’s suggestions. The laws are also against the opinions of international community and the actual desires of the people of Myanmar. […]
March 16, 2010 • By United Nationalities Alliance • Tags: 2010 Elections, Election Laws, United Nationalities Alliance • Read more ➤